🥇 ▷ IPad 11 Pro xawaare badan: iPhone XS aad ayuu uga dhakhso badan yahay kan cusub ee iPhone ✅
IPad 11 Pro xawaare badan: iPhone XS aad ayuu uga dhakhso badan yahay kan cusub ee iPhone
IPad 11 Pro waxay wajahaysay iPhone XS iyo iPhone X tijaabinta xawaaraha mana ahan qaab cusub oo soo baxo oo ku guuleysta xawaaraha ugu dheereeya. The iPhone 11 Pro waxaa garaacay iPhone XS oo qaadatay 28 ilbiriqsi kayar si uu u bilaabo isku xigxiga dalabyada. Farqiga ayaa si weyn looga fiirsanayaa iyada oo la ogyahay in SoC A13-ka cusub uu 20% ka awood badan yahay. IPhone X kiiskiisa ayaa si macquul ah uga duubay labada moodel ee cusub.
Xawaaraha ay ku bilaabmayso dalabyadu waa mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee khibradda adeegsadaha. The YouTuber Wax kasta oo Apple Pro xaqiiqsadeen a xawaare badan si loo cabbiro waxqabadka iPhone 11 Pro marka loo eego iPhone XS laakiin sidoo kale iPhone X. Halkan waxaa ah natiijooyinka tijaabada xawaaraha ee seddex iPhone.
The iPhone 11 Pro ayaa ka gaabiyaya iPhone XS
Tijaabada xawaaraha wuxuu ka koobnaa si guul leh u bilaawidda barnaamijyo taxane ah. Waqtigii ay qaateen iPhone kasta si adag ayaa loo qabtay. Xawaaraha ugu dhakhsaha badan ayaa lagu gaadhay laba weji. Wareegii koowaad wuxuu tijaabiyey xawaare cayriin ee iPhone 11 Pro, iPhone XS iyo iPhone X inta lagu gudajiray bilowga codsiyada. Codsiyada isku midka ah ayaa dib loo soo nooleeyay ka dib si loo muujiyo awoodda saddexda iPhone ay uga faa’iidaystaan ​​xusuusta si ay si dhakhso leh ugu soo nooleeyaan codsiyada.
Wareegii koowaad, iPhone X si macquul ah ayuu uga gudbey moodooyinka cusub. IPad 11 Pro wuxuu ku yimaadaa booska koowaad, laakiin kaliya 1 ilbiriqsi ka horreeya iPhone XS. Dhamaadka wareega labaad, iPhone XS wuxuu qabtay oo xitaa uu ku guuleystey inuu sii haysto farqiga u ah 28 ilbiriqsi oo ku yaal iPhone 11 Pro. Tani waxay u tarjumaysaa XS ka fiican si loogu habeeyo codsiyada xasuusta si dhakhso ah. Runtii waxay soo gabagabeysey labada weji ee xawaaraha ugu dheereeya gudaha 5 daqiiqo iyo 21 sekan. IPhone 11 Pro cusub ayaa dhigay 5 daqiiqo iyo 49 ilbidhiqsi. Marka loo eego iPhone X, waxay gaadhay waqti ah 7 daqiiqo iyo 27 sekan.
Wax qabadkan iPhone 11 Pro wuxuu wali yahay wax qarsoon isagoo og in chip Apple A13 loo maleynayo inuu 20% ka awood badan yahay. Xusuusin ahaan, iPhone 11 Pro iyo iPhone XS waxay wadaagaan isla lacagta RAM 4 GB. Tani maahan qodobka sharxaya farqiga u dhexeeya waxqabadka u dhexeeya labada moodel. Dhammaan tilmaamayaasha ayaa sheegaya in dhibaatadu ay ka timid macruufka 13.0 kaasoo sida muuqata saameyn xun ku leh waxqabadka iPhone 11 Pro inta laga sugayo cusbooneysiinta soo socota.